Izinhlamvu ezithandwayo zikaJames Joyce | Izincwadi Zamanje
Izincwadi ezivusa inkanuko ezivela kuJames Joyce
UBelen | | Abalobi, eziningana
Okuthile okungidonsele ukunakekela kwakuwukuthola ukuxhumana phakathi James Joyce Nomkakhe UNora Barnacle. Ukuvusa inkanuko okukhulu kwezinhlamvu ezifana nokuthinta umngcele ophakathi kwalabo abasikiselwe nababekwe obala ezindaweni eziningi. Futhi kwesinye isikhathi, kuthinta umkhawulo phakathi kokusobala nalokho futhi, kucace ngokweqile.
I-eroticism kanye nenkanuko yababhali iphuzu lapho betholakala khona kakhulu, futhi ikakhulukazi kulolu hlobo lwezincwadi, lapho isidingo sobabili sibonakala sisiphoqa ukuba sisondele, sisinikeze "okungcolile" kakhulu ukuzama (njengoba kusho uJoyce kwelinye ezincwadini zakhe) zalabo amagama abo adunyisiwe "ngenhlanzeko" yabo.
Lapha ngihlanganyela nawe ezinye zezinhlamvu:
1 Novemba 22, 1909 - 44 Fontenoy Street, eDublin
2 Disemba 2, 1909 - 44 Fontenoy Street, eDublin
3 Disemba 3, 1909 44 Fontenoy Street, eDublin
Novemba 22, 1909 - 44 Fontenoy Street, eDublin
Othandekayo, ucingo lwakho lwalusenhliziyweni yakhe ngalobo busuku. Lapho nginibhalela lezo zincwadi zokugcina, ngangiphelelwe yithemba ngokuphelele. Bengicabanga ukuthi ngilahlekelwe uthando lwakho nokuhlonishwa kwakho ... futhi ngifanele. Incwadi yakho namhlanje ekuseni imnandi kakhulu, kepha ngilinde incwadi ongayibhala ngemuva kokuthumela itelegram.
Angikalokothi, sithandwa sami, ukujwayela wena, uze unginike imvume futhi. Nginomuzwa obekungafanele ngize, noma ngabe incwadi yakho ibhalwe ngethoni yakho endala, ejwayelekile nenenhlekelele. Ngiqonde ukuthi uma ukhuluma ngalokho ozokwenza, uma ngingakuthobeli ngodaba oluthile.
Ngizozama ukusho into eyodwa nje. Uthi ufuna udadewethu akufakele izingubo zangaphansi. Cha, sithandwa, ngicela. Angithandi muntu, ngisho nowesifazane noma intombazane, ukubona izinto okungezakho. Ngingathanda ukuba uqaphele futhi ungashiyi izingubo zakho ezithile zilele, ngiqonde ukuthi lapho befika nje ekhaya bevela egumbini lokuwasha. O, ngifisa sengathi ngabe ungagcina zonke lezo zinto zifihliwe, zifihliwe, zifihliwe. Ngingathanda ukuthi ube nenqwaba yezingubo zangaphansi zazo zonke izinhlobo, zazo zonke izinhlobo zemibala entekenteke, egcinwe, e-ayinelwe nephunga.
Kubi kanjani ukuba kude nawe! Ngabe usamukele isithandwa sakho esimpofu sabuyela enhliziyweni yakho? Ngizophelelwa yisineke ngencwadi yakho, kepha-ke ngiyabonga ngocingo lwakho olunothando.
Ungangiceli ukuthi ngikubhalele incwadi ende manje, sithandwa sami. Engikubhalile kungiphathe kabi kancane. Sengikhathele ukukuthumelela amagama Izindebe zethu ezinamathele, izingalo zethu zibambene, amehlo ethu ehluleka enjabulweni edabukisayo yokuba nempahla kungangijabulisa kakhulu.
Ungixolele sithandwa sami. Ngangihlose ukuzibekelela ngaphezulu. Noma kunjalo kufanele ngikulangazelele futhi ngikulangazelele futhi ngikulangazelele.
Disemba 2, 1909 - 44 Fontenoy Street, eDublin
Sithandwa sami, mhlawumbe kufanele ngiqale ngokucela uxolo kuwe ngencwadi emangalisayo engikubhalele yona izolo ebusuku. Ngenkathi ngiyibhala, incwadi yakho yayihlala eceleni kwami, futhi amehlo ami ayethe njo, njengoba namanje esenjalo, egameni elithile elibhalwe kulo. Kukhona okuthile okuyihlazo nokuhlambalazayo mayelana nokubukeka kwamakhadi. Futhi umsindo wayo ufana nesenzo uqobo, esifushane, esinesihluku, esingenakuphikiswa futhi esibuhlungu.
Sithandwa sami, ungakhubekisi engikubhalayo. Uyangibonga ngegama elihle engikunike lona. Yebo, sithandwa sami, "imbali yami enhle yasendle yamathango" yigama elihle! Imbali yami eluhlaza okwesibhakabhaka, emanziswe yimvula! Njengoba ubona, ngisenokuthile okuyimbongi. Ngizokunikeza nencwadi enhle: iyisipho smbongi kumuntu wesifazane amthandayo. Kepha, eceleni kwakhe nangaphakathi kwalolu thando olungokomoya engizwela lona ngawe, kukhona nesilo sasendle esihlola yonke imfihlo yakhe nehlazo laso, isenzo ngasinye nephunga laso. Uthando lwami kuwe lungivumela ukuthi ngithandaze kumoya wobuhle baphakade nobumnene obubonakala emehlweni akho noma ukukuletha ezansi kwami, emabeleni akho athambile, futhi ngikuthathe ngemuva, njengengulube egibele ingulube, ikhazinyulisiwe ekunukeni okuqotho okuvela embotsheni yakho, kukhazinyuliswa ngehlazo elingenalutho lengubo yakho ephendukile namabhulukwe akho amhlophe amantombazane nasekudidekeni kwezihlathi zakho ezibomvana nezinwele eziphazamisekile.
Lokhu kungivumela ukuba ngikhihle izinyembezi zokudabukela nothando lwakho ngenxa yomsindo othile womculo noma imisindo yomculo noma ukulala phansi ngekhanda ezinyaweni, umsila ngomsila, ngizwa iminwe yakho ingiphulula futhi ikitaza amasende ami noma uzizwe uthanjiswa isinqe sakho kimi nezindebe zakho ezivuthayo zimunca iqhude lami ngenkathi ikhanda lami lihamba phakathi kwamathanga akho amakhulu futhi izandla zami ziheha ijika eligcwele ezinqeni zakho nolimi lwami lukhotha kakhulu ubulili bakho obukhulu obomvu. Ngikucabangile ngaze ngacishe ngaphelelwa amandla lapho ngizwa izwi lami licula noma libubula emphefumulweni wakho usizi, intshisekelo nemfihlakalo yempilo futhi ngasikhathi sinye ngicabange ukuthi wenza ukushukuma okungcolile ngezindebe zakho nolimi lwakho, ungicasula ngemisindo engamanyala nokungiphulula nokwenza phambi kwami ​​isenzo esingcolile nesiyihlazo kakhulu somzimba. Uyalukhumbula usuku owadonsa ngalo izingubo zakho wangivumela ngalala ngaphansi kwakho ukubona ukuthi ukwenze kanjani? Lapho-ke ubenamahloni okuthi ungibheke ngisho nasemehlweni.
Ungowami, sithandwa sami, ungowami! Ngiyakuthanda. Engikubhalile ngenhla umzuzwana owodwa noma emibili yobuhlanya obunesihluku. Ithonsi lokugcina lesidoda lifakiwe kanzima ocansini lwakho ngaphambi kokuba konke kuphele futhi uthando lwami lweqiniso kuwe, uthando lwamavesi ami, uthando lwamehlo ami, ngoba amehlo akho alinga ngokumangazayo eza eshaya phezu komphefumulo wami njengomoya iphunga. Iqhude lami lisaqinile, liyashisa futhi liyaqhaqhazela ngemuva kokuvuna okokugcina, okunesihluku akunikeze khona lapho ezwa iculo elinethile, lokukhuleka kothando nokunethezeka ekuhlonipheni kwakho, kusuka emafutheni amnyama enhliziyo yami.
Nora, sithandwa sami esithembekile, intombazane yesikole yami enamehlo amabi, yiba isifebe sami, sithandwa sami, noma yini oyifunayo (umthandi wami wesandla omncane! Bitch yami!) Uhlala uyimbali yami enhle yasendle, imbali yami emnyama imnyama ngemvula.
Disemba 3, 1909 44 Fontenoy Street, eDublin
Intombazanyana yami ethandekayo yamanazaretha: kunenkanyezi ethile esondelene kakhulu nomhlaba, ngoba ngisesesisulu sokuhlaselwa yisifiso somkhuhlane nesilwane. Namuhla bengivame ukuma ngokungazelele emgwaqweni ngibabaze, noma nini lapho ngicabanga ngezincwadi engikubhalele zona izolo ebusuku nobusuku obandulele. Kumelwe ukuba babebukeka besabekayo ekukhanyeni kwasemini okubandayo. Mhlawumbe ubungakuthandi ukudelela kwabo. Ngiyazi ukuthi ungumuntu ongcono kakhulu kunesithandwa sakho ongamazi futhi, yize bekunguwe uqobo, wena ntombazanyana enesibindi, owabhala kuqala ukungitshela ukuthi awunaso isineke sokuthi ngikubhebhise, namanje ngicabanga ukuthi ukungcola kwasendle namanyala Impendulo yami yeqe yonke imikhawulo yesizotha. Lapho ngithola incwadi yakho ocacile namhlanje ekuseni futhi ngibona uthando lwakho kuJim wakho odelelekile, ngibe namahloni ngengikubhalile. Kodwa-ke, manje ubusuku, ubusuku obuyimfihlo nobunesono, sebuwele futhi emhlabeni futhi sengiphinde ngedwa ngikubhalela futhi incwadi yakho iphinde yagoqwa phambi kwami ​​etafuleni. Musa ukungicela ukulala, sithandwa. Ake ngikubhalele, sithandwa.
Njengoba wazi sithandwa sami, angikaze ngisebenzise amagama angcolile lapho ngikhuluma. Awukaze ungizwe, angithi, usho igama elingalungile phambi kwabanye abantu. Lapho amadoda alapha ekhuluma izindaba ezingcolile noma ezingcolile phambi kwami, angimomotheka neze. Futhi nokho uyakwazi ukungiguqula ngibe yisilo. Nguwe, wena, owafaka isandla sakho ebhulukweni lami wangiphushela ihembe lami ngobumnene wangithinta iqhude lami ngeminwe yakho emide, ekitazayo futhi kancane kancane wawuthatha uphelele, ukhuluphele futhi uqinile njengoba wawunjalo, ngesandla sakho nawe wanginikeza i-handjob kancane kancane ngaze ngangena phakathi kweminwe yakho, ngaphandle kokuyeka ukuncika phezu kwami, noma ukungibuka ngamehlo akho apholile futhi angcwele. Izindebe zakho nazo ebezokuqala ukukhipha igama elingamanyala. Ngikhumbula kahle ngalobo busuku embhedeni ePola. Ngikhathele ukulala phansi kwendoda, ngobunye ubusuku waklebhula ingubo yakho yokulala ngamandla futhi wakhuphukela phezulu ukuze ungigibele nginqunu. Ufake iqhude lakho engubeni yakho bese uqala ukungigibela phezulu naphansi. Mhlawumbe angizange ngibe ne-horny ngokwanele, njengoba ngikhumbula ukuthi uncike ebusweni bami futhi wabubula ngothando, "Fuck me, darling!"
Nora sithandwa, bengifa usuku lonke ukukubuza umbuzo noma emibili. Ngivumele, sithandwa sami, ngoba ngikutshele konke engikwenzile empilweni yami; Ngakho-ke, yini engingakubuza yona, yona. Angazi noma uzobaphendula yini. Lapho lowo muntu inhliziyo yakhe ngifisa ukuyeka ukudubula ngevolovolo ebeka isandla sakhe noma izandla zakhe ngaphansi kweziketi zakho, ingabe wakukitaza ngaphandle nje noma wanamathela umunwe wakhe noma iminwe? Uma kwenzeka, bakhuphukele phezulu ngokwanele ukuthi bangathinta leloqhude ekugcineni kukamalusi wakho? Ngabe ikuthinte ngemuva? Ubekukitaza isikhathi eside kanti uze yini? Ngabe wakucela ukuthi uyithinte futhi uyenzile? Uma ungayithintanga, ingabe ifike kuwe futhi uyizwile?
Eminye imibuzo, uNora. Ngiyazi ukuthi bengiyindoda yokuqala yokukubamba, kepha ingabe umuntu wake wakususa? Ngabe lowomfana obumthanda wake wakwenza? Ake ungitshele manje, Nora, phendula iqiniso ngeqiniso nobuqotho ngobuqotho. Ngenkathi wawunaye ebusuku phakathi kobusuku, ingabe iminwe yakho ayikaze, ihlale ikhumule ibhulukwe noma iwele ngaphakathi njengamagundane? Ngabe wake wamhlubela isithandwa sami, ungitshele iqiniso, yena noma omunye umuntu? Awukaze uzwe, iqhude lendoda noma lomfana eminweni yakho uze ungqaqe izinkinobho zebhulukwe? Uma ungakhubekile, ungesabi ukungitshela iqiniso. Sithandwa, sithandwa kulobubusuku nginesifiso esibi kangaka ngomzimba wakho ukuthi ukube ubukhona lapha kimi futhi noma ngabe ungitshele ngezindebe zakho ukuthi uhhafu wezingubo ezibomvu esifundeni saseGalway zikukhangile ngaphambi kwami, bengisazoqhubeka gijimela kuwe ufile isifiso.
Nkulunkulu Somandla, luhlobo luni lolimi lolu engilubhalela indlovukazi yami eziqhenyayo enamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka? Uzokwenqaba ukuphendula imibuzo yami engenanhlonipho nenhlamba? Ngiyazi ukuthi ngizibeka engcupheni enkulu ngokubhala kanjena, kepha uma ungithanda, uzozwa ukuthi ngiyahlanya ngesifiso nokuthi kufanele ngikutshele konke.
Sthandwa, ngiphendule. Ngisho nalapho ngithola ukuthi nawe wonile, mhlawumbe ngingahle ngizizwe ngihlangene kakhulu kuwe. Noma kunjalo, ngiyakuthanda. Ngibhale futhi ngasho izinto kuwe ukuthi ukuziqhenya kwami ​​ngeke kungivumele ukuthi ngisho kunoma yimuphi umuntu wesifazane futhi.
Nora wami othandekayo, ngibheke izimpendulo zakho kulezi zincwadi zami ezingcolile. Nginibhalela ngokusobala, ngoba manje nginomuzwa wokuthi ngingaligcina izwi lami kini. Ungathukutheli, sithandwa, sithandwa, Nora, imbali yami yasendle yamathango. Ngiyawuthanda umzimba wakho, uyawulangazelela, ngiyaphupha ngawo.
Khuluma nami izindebe ezithandekayo engizange ngezinyembezi. Uma lezi crap engizibhalile zikucasula, ngenze ngibuyise ingqondo yami futhi ngokuqhuma, njengoba wenze ngaphambili. UNkulunkulu angisize!
Ngiyakuthanda Nora, futhi kubonakala sengathi lokhu futhi kuyingxenye yothando lwami. Uxolo! Uxolo!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Izincwadi ezivusa inkanuko ezivela kuJames Joyce
Amazwana ayi-20, shiya okwakho
uJoseonardo arango v kusho
Ngicabanga ukuthi izincwadi zakhe zithakazelisa kakhulu futhi zinothando olukhulu.Ngicabanga ukuthi ungumuntu okucacayo kahle lokho akufunayo futhi ungakuthola ngoba izincwadi zakho ziyajabulisa. ngiyabonga ngokufana namahere
Phendula ku-jose leonardo arango v
Joaquin Martinez kusho
Lapho beshiya izincwadi ababhali badabukile ... Indoda encane uJoyce ... kanye negilada deified ulises !!!
Phendula ku-joaquin martinez
Kuhle kakhulu. Futhi ngiyabonga ngokwabelana ngalezi zincwadi lapho uthando lwezocansi luyizinkondlo.
Kuyangigcwalisa ukujabula ukubona ukuthi ingcweti yezincwadi iwafaka kanjani wonke amazwi ayo esebenzela uthando lwayo, izifiso zayo ezisondelene kakhulu ... okuyindlela eyingxenye yokuqala.
Madoda, ngiyacela, musani ukuyibeka icala le ndoda ... ayenzanga lutho ngaphandle kokukhombisa imizwa ejulile yobudoda bayo kulentokazi eyayiyithathele ngasese ...
Angeke sikuphike .. nalolu uthando.
Ngabelana ngemibono eminingi evezwe lapha futhi engingabelani ngayo ngiyayihlonipha….
kubantu abangayithandi into vele uthi phasa futhi akukho okunye ongakutholi lutho ngokuzikhandla ngokubhala ukushiya igagasi lakho elibi 😉
izinhlamvu sezivele zibhaliwe nesikhathi
ngendlela abangomama ngayo, okuhle ukuxhaphaza leyo ngxenye yomuntu ngamunye, bathole konke k flow eroticism, k phambili ubulili nezingqondo ezivulekele kokuhlangenwe nakho okusha
Yini okubalulekile uma ukhona uno- «H» noma ngaphandle kwe- «H» incwadi iyaqondwa =
Kodwa-ke, uma kukhona ingane, ubheka ukuthi leli iphutha labazali, bayayekela i-cabreria ihambe mahhala
aaahh !!! Uma beqaphele, ungafaki ama-period, ungawenzi amakhoma noma yini, ngoba ngiyazi ukuthi lowo ofunda lokhu uzokwazi ukuthi bengiqonde ukuthini futhi enze i-xdd
irosemary emnandi kusho
Lezo zincwadi zinothando olukhulu, ngiyayithanda yonke leyonkanuko, lolo hlanya lokufuna ukuphatha lowo wesifazane ongaseyona eyakhe ... ngiyaluthanda
Phendula i-rosemary emnandi
Ngiyazifela ngayo yonke into ephathelene nothando nezocansi .... lezi zincwadi ziyashisa kakhulu ... umbhali muhle kakhulu
Obani emiqondweni yabo efanele bangahlulela la makhadi amahle? Noma ngubani okwenzayo, umane akayazi imvelo yomuntu, akazange aphile ulimi olunqunu lothando kanye nenkanuko. Zibukeka ziluhlaza kahle futhi ziqotho kimi. Angitholi lutho oluyichilo entweni enhle, eyinkondlo nejwayelekile njengobulili bomuntu.
Bonke abesifazane bafuna owesilisa osithandayo achaze imizwa yakhe, uthando aluzwayo nogqozi olungavuswa aze abe yindoda yasendle egcwele uthando nesisa ngasikhathi sinye. Ngiyayithanda indlela uJoyce aveza ngayo izifiso zakhe nothando lwakhe.
Umbono wami ngukuthi ziyizincwadi eziyingozi kakhulu futhi ngokusobala zazithakazelisa uJoyce nesithandwa sakhe kuphela. Ikakhulu, angicabangi ukuthi basiza umbhali kakhulu ngoba bangakha enye imibono kunaleyo ebesinayo ngombhali omkhulu. Abanye baze babafanelekele njengezithombe zocansi. Njengoba ngishilo, azimsizi kakhulu umbhali omkhulu futhi ngokusobala babenobuntu obusondelene. Angicabangi ukuthi ubeyothanda ukuthi idalulwe!
Ngizizwa ngikhungathekile lapho ngibona ukuthi kunezinhlamvu ezi-3 kuphela, ngemuva kokuzifunda nginesidingo sokuningi.
Uthando lunezindlela eziyinkulungwane zokuveza futhi uJames ubengungqondongqondo, ubuqotho bezitatimende zakhe nendlela yokuphakamisa ukukhonza kwakhe izithombe komlingani wakhe kusenza sizibuze ukuthi ngabe nathi asenzanga yini lokho.
Ubulili yinto engokwemvelo futhi ejwayelekile. Lezi zincwadi azizona neze izithombe zocansi. Kungaba yizithombe zocansi uma uJames Joyse ebhale lezi zincwadi ukuzithengisa futhi azuze kuzo. Uvele wazibhala ngokusondelana nowesifazane amthandayo.
Sawubona! Ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe lukhona yini uhlobo lokuhlanganiswa lapho zonke izinhlamvu zikhona, ngiyaqonda ukuthi yebo, ngivela eMexico futhi bekufanele ngibone isiteji esihlobene nezinhlamvu futhi esivuse isifiso sami sokwazi kabanzi, ngicela impendulo!
Kimi ababona "Abampofu uNora, abampofu uJames Joyce." Abampofu bakhohliwe, labo asebafa futhi bahlala bengaziwa ngokuphelele. Futhi angivumelani nalokho: "Abafanele." Ngicabanga ukuthi bayakufanelekela, ngoba wayegcine enhliziyweni yakhe uthando olujule kakhulu, olunobuntu kangaka, nolungenangqondo, kangangokuba lumgqugquzele ukuthi akwazi ukuthulula lawo magama amahle ephepheni futhi akwazi ukuvusa uthando olunjalo endodeni enezinsizakusebenza eziningi zokukwazi ukuveza imizwa yakhe ephakeme kakhulu nephendukezela isikhumba sothandekayo wakhe. Bazobaningi abacasulwa yilawo mazwi, kepha abanye abaningi, sizoyithanda leyoncwadi, sizidle futhi sizigcine enkumbulweni yethu ngentshiseko yokwazi ukubona ipharadesi lakwamanye amazwe, kepha lihle njengale ukwedlula okwethu.
Phendula uPalonia Nice
URachel Sierra kusho
kimi, ukungaboni lutho ngocansi nemizwa abayikhiphayo ngamakhadi amahle amabi
Phendula uRaquel Sierra
URigail Martial kusho
UJoice, umsunguli we-INNER MONOLOGO ku-ULISYSS yakhe, akazange abhale izincwadi zakhe ukuze sizifunde, wazibhalela ukuthi othandekayo wakhe azifunde. Okuqukethwe kwayo kungokwabo kuphela njengothando lwabo olujulile nolomuntu. Kepha uma ngasizathu simbe, beze kithina, behlekisa ngokusondelana kwemibhalo, masingabi ngabazenzisi bezocansi, ngoba, ngubani okuncane noma okuncane, okufanele ahambe ngendlela yothando, namuhla noma kusasa. Uma kungenjalo, yisho, ngosuku lokuqala lokufa, ukuthi awukaluboni uthando lwenyama ngalo lonke ubukhulu balo.
Phendula uRigail Marcial
Uyakwazi ukudlala ngqo lapho sithanda khona abesifazane
Ngimangele kakhulu futhi ngimangele! Ngifunde imibono engakholeki ngempela.Yebo engakholeki ... kuvela ukuthi bayazivumela ukuthi bangabaze futhi babhekise nezithombe zocansi. Ngibona lezo zinhlamvu zizinhle (khumbula ukuthi zazingezabanikazi), isibopho phakathi kukaJoyce noNora kusobala ukuthi sasondelene kakhulu nokucabanga okuvulekile nokwenziwe ngobuqotho. Ngicabanga ukuthi imibono eminingi ingeyabantu abazenzisayo nokuziphatha okungabizi.
Ngangibathanda… bathembekile, banothando, bavusa inkanuko… UJoyce ungumnumzane onothando kuNora. Kungani ubuza futhi uveza umbono ngokungenangqondo nokungazi? Vula ingqondo yakho! UDeveli ngeke eze azobafuna. Awuthandi ngothando, awazi ukuthi ungaba qotho kanjani ...
Omunye umbono uveza ukukhathazeka kwawo kokuthi ingane izobabona ... njengoba ngimazisa ukuthi nsuku zonke zonke izingane zibona izimo ezinyantisayo (ngokwesibonelo izindaba ze-TV), ukuphathwa kabi kwabantu abasondelene ... noma kunjalo; ubuwula bomuntu, ukuzenzisa nokungazi kunabamele babo lapha .... zama ukuthuthukisa lezo zici.
USergio quintana kusho
Sizishaya amacilongo uma owesifazane osithandayo ngokubhala leyo migqa engeke avuke ngokuthokoza okujabulisa kakhulu? Lokhu kuhle, kuyamangalisa, wulimi olunqunu lwenkanuko evusa inkanuko evuthayo, yothando oluvuthayo, labo abangazithandi izikhundla zabo bayahlonishwa kakhulu; ngamunye unemilingo yabo ngaphakathi futhi uyayidlulisa.
Phendula uSergio Quintana
Izinkathi Ezine ZikaManuela
UFaulkner nezeluleko zakhe